App ကို Lock ကို | APK ကို Android အတွက် Download
ပုံစံနှင့်အတူသော့ခတ် app ကို
စကားဝှက်နဲ့ Lock ကို app ကို
WhatsApp ကို, Facebook, ပြခန်းသို့မဟုတ်သင်ချင်တယ်ဘာမှတူသော app များကိုသော့ခတ်ခြင်းအားဖြင့်သင့် privacy ကိုထားပါ။
တစ်ဦး "secure" ဒါပေမယ့် "သော့ဖွင့်ရန်လွယ်ကူ" ပုံစံနှင့်သင်၏ app များကိုသော့ခတ်။
ပုံစံ, စကားဝှက်များကသော့ခတ်, သော့ခတ် apps များအဘို့များစွာသောအမျိုးအစားများ keypad ။ အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့
သငျသညျဥပမာ, သင့်သော့ခတ်စိတ်ကြိုက်ပြီပြောင်းလဲမှုသော့ခတ်အမျိုးအစား, background- လူမှု apps များကိုပြောင်းလဲရန်: AppLock ဒါပေါ်မှာ Facebook က, WhatsApp ကို, Messenger ကိုက, Twitter, Instagram ကို, Snapchat, WeChat နှင့်သော့ခတ်နိုင်ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှပိုပြီးသင့်ရဲ့ပုဂ္ဂလိကချက်တင်မှာပြူနိုင်ပါတယ်။
- System ကို apps များ: AppLock ဆက်သွယ်ရန်, SMS ပြခန်း, ဗီဒီယိုများ, Email နဲ့ဒါပေါ်မှာသော့ခတ်နိုင်ပါတယ်။ စနစ်က apps များအဘို့အဘယ်သူအားမျှမလုပ်နိုင်တဲ့ရှုပ်ထွေးတက်သင့်ရဲ့ settings ကို။
- အန်းဒရွိုက်လစာ apps များ: AppLock ဒါအပေါ်မှာ Android Pay ကို Samsung က Pay ကို, Paypal နှင့်သော့ခတ်နိုင်ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှကို item ဝယ်ယူရန်သင့်ပိုက်ဆံအိတ်ကိုသုံးနိုင်သည်။
- အခြား app များကို: AppLock ဒါအပေါ်မှာ Gmail, Youtube ကို, ဂိမ်းများနှင့်အပါအဝင်မည်သည့် Third-party apps များ, သော့ခတ်နိုင်ပါတယ်။ ။ လုံးဝသင့်ရဲ့ privacy ကိုကာကွယ်ပေး★★★ AppLock နှင့်အတူ, သငျသညျလိမ့်မည်:
- မိဘများကသင်၏ Snapchat, Musical.ly စစ်ဆေးစိုးရိမ်ဘယ်တော့မှမ!
- တစ်စုံတစ်ဦးကိုနောက်တဖန်သင့်ရဲ့ apps များအတွက်ပုဂ္ဂလိက data တွေကိုဖတ်စိုးရိမ်ဘယ်တော့မှမ!
- နောက်တဖန်ဂိမ်းများကိုပေးဆောင်, မှားယွင်းတဲ့မက်ဆေ့ခ်ျပို့လေးတွေရှုပ်ထွေးအကြောင်းကိုခြိနျညှိတက်စိတ်မပူပါနဲ့ဘယ်တော့မှမ!
★★★ App ကို Lock ကိုနှင့်အတူ, သင်လုပ်နိုင်သည်မှာ:
- မည်သည့် apps များ (မက်ဆေ့ခ်ျကို, ဂိမ်း, ဓာတ်ပုံများ, ဗီဒီယိုများ ... ) သော့ခတ်
- အတုအတင်းအဓမ္မပိတ် Pop-up ကိုအသုံးပြုပြီး Lock ကို apps များ
- မျိုးစုံသောစကားဝှက်ကို အသုံးပြု. Lock ကို apps များ
- ကလေးတွေကရှုပ်ထွေးကာကွယ်တားဆီးဖို့ Lock ကို system setting များကို
- Lock ကို Google ကဝယ်ယူဂိမ်းများကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ Play ရုပ်ရှင်များ, စာအုပ်များ
- Lock ကိုမက်ဆေ့ခ်ျကို, Lock ကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှု ...
- Lock ကိုဖုန်းက setting ကို
★★★ Feature ကို
- Pattern ကို Lock ကို: ရိုးရှင်းပြီးလတ်ဆတ်တဲ့ interface ကို, ပိုမြန်သော့ဖွင့်!
- PIN ကိုသော့ခတ် (ခလုတ်သော့ခတ်): သင် app များကိုသော့ခတ်ရန်အဘို့အအများကြီးပိုလုံခြုံ
- Customize: ပြောင်းလဲမှုအမျိုးအစားပြောင်းလဲမှုခလုတ်, ပြောင်းလဲမှုနောက်ခံပုံများ
- Lock ကို app ကိုအလွန်ထိရောက်သော
- Lock ကို app ကိုအလွန်မြင့်မားလုံခြုံရေး
- Lower စွမ်းရည်နည်းမှတ်ဉာဏ်။
- ဘက်ထရီကယ်ဖို့ mode ကိုချွေတာပါဝါ။
- က App Lock ကိုမျက်စိနှင့်နှာခေါင်းကြီးသောမိတ်ဆွေများကို prying မှသင်၏ဓါတ်ပုံများ, ပြခန်းများနှင့်မက်ဆေ့ခ်ျများသော့ခတ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ privacy ကိုအစောင့်ဖြစ်!
- လျှောက်လွှာသော့ခတ်, အကောင်းဆုံး app ကိုသော့ခတ် & privacy ကိုအစောင့်, အများဆုံးမတ်လျှောက်လွှာသော့ခတ်ပါ!
- တိကျစွာနှင့်ပေါ် မူတည်. သင့်ရဲ့ app ကိုသော့ခတ်
- စွမ်းဆောင်မှုနှင့် power-saving မှာကောင်းမွန်သော
မှတ်ချက်: ဒီ app applications များ uninstall လုပ်ရာမှဟက်ကာများတားဆီးဖို့စက်ပစ္စည်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးခွင့်ပြုချက်ကိုအသုံးပြုသည်။ သင်ဤသင့်ရဲ့ device setting တွင် disable / enable နိုင်ပါတယ်။
စမတ်မိုဘိုင်း Tools များ